Iipuzzle 🥇 Ngena kwaye wonwabe kwi-Emulator
Qaphela: ukudlala inguqulelo yeselfowuni ujikeleze isikrini
Iipuzzle Apha ngezantsi siza kukubonisa yonke into ekufuneka uyazi ukuqonda lo mdlalo mhle. Ukusuka kwintsingiselo yayo ye-etymological, imvelaphi yayo, izibonelelo zayo, iintlobo zeephazili ezikhoyo kunye neendlela zokuyicombulula ngokukhawuleza.
Iipuzzle: Idlalwa njani inyathelo ngenyathelo 😀
Ukwenza i iphazili online simahla, kufuneka nje landela le miyalelo inyathelo ngenyathelo:
1 nyathelo. Vula isikhangeli sakho osithandayo kwaye uye kwiwebhusayithi yomdlalo Isiphelo sendlela
2 nyathelo. Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi, umdlalo sele uza kuboniswa kwiscreen. Kufuneka kuphela ukudlala umdlalo kwaye ungaqala ukukhetha iphazili oyithandayo kakhulu. Unokukhetha umfanekiso owuthanda kakhulu, nasemva kokuyikhethaUnokukhetha nenani lamaqhekeza ayakuba nayo iphazili.
Inyathelo le-3. Nanga amanye amaqhosha aluncedo. Ngaba "Yongeza okanye susa isandi", Nika iqhosha"umdlalo"Kwaye uqale ukudlala, unga"Nqumama"kwaye"Qalisa kwakhonaNanini na.
Inyathelo le-4. Dibanisa onke amaqhekeza ngendlela yokuba umfanekiso owukhethileyo wenziwe.
Inyathelo le-5. Emva kokugqiba umdlalo, cofa "Phinda Uqalele" ukwenza ezinye iiphazili.
Yintoni iphazili? 🧩
Un iphazilingu- umdlalo owenziwe ngamaqhekeza aliqela nalahlukileyo ekufuneka edityanisiwe ukwenza konke, ngokubanzi umzobo, imephu okanye iifoto. Ngumdlalo omdala kakhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yezona zinto zithandwayo ngabantwana kunye nabantu abadala. Ukongeza, inegalelo kuphuhliso lothotho lwezibonelelo zengqondo.
Kodwa nabani na ocinga ukuba iphazili isandula ukwenziwa ayilunganga. Njengokuba benditshilo, mdala kakhulu. Kwaye, okokuqala, ukuveliswa kwakhe yayiyenye injongo.
Imvelaphi yePuzzle ☝️
Nangona ababhali-mbali bengekatsho ukuba iphazili yavela nini, kukho iingcinga malunga nemvelaphi yayo.
Enye yezona zamkelweyo kukuba umzobi weemaphu waseNgilani, UJohn Spilsbury, wasungula umdlalo. Ukuze abafundi bakhe bafunde iJografi, ngo-1760 uJohn wenza iseti yamaqhekeza anamalungu ehlabathi. Ngokudibeneyo, benza imephu yehlabathi. Sebenzisa iibhodi zomthi kunye ne-stilettos, I-Spilsbury unike abafundi bakhe ukonwaba nokufunda.
Kodwa Abanye bathi iphazili yaqanjwa ngamaTshayina. Tangram Yinto yokudlala yakudala e-China. Inamaqhekeza asixhenxe kuphela, kodwa avumela ukuyilwa kwemifanekiso eliqela. Nangona kunjalo, yahluke kakhulu kwizintsonkotha esiziqhelileyo.
Ngapha koko, emva kokuyilwa kweSpilsbury, iphazili laye lathandwa kakhulu. Oko kukuthi, zazenziwe ngesandla, ke zazibiza kakhulu. Ngaba kuphela kwi-Industrial Revolution (1760-1820 / 1840) ukuba iphazili yafumana ixabiso eliphantsi. Kungenxa yokuba Inkqubela phambili yetekhnoloji yeRevolution Banike izixhobo eziyimfuneko ukwenza into yokudlala ngokukhawuleza kwaye ngexabiso eliphantsi.
Ngexesha loxinzelelo olukhulu (ngo-1929), into yokudlala yafumana ukukhula kwimveliso. Kwakukho nokurenta iphazili ngeesenti ezili-10 ngeyure! Ngaphezulu kwako konke, abantu bafuna ukoneliseka kunye nokwoneliseka xa bedlala ngento yokudlala.
Imvelaphi yegama elithi Puzzle
Igama elithi Puzzle (iphazili ngeSpanishIyaziwa kwaye isetyenziswa ngumntu wonke. Imvelaphi yayo sisiNgesi. Iingcambu zayo ze-etymological zivela kwisiLatini, ukusuka kwisenzi sesiLatini Ndiza kubeka ( ithatha ukuba kubeka).
Uyenza njani iphazili: Iingcebiso
Khetha iphazili efanelekileyo
Isalathiso sobudala kwiphakheji siluncedo, kodwa akufuneki sisetyenziswe njengenqobo eyodwa. Kananjalo jonga ulwazi lomntwana wakho ngalo mdlalo. Ukuba umntwana akanamava angaphambili, khetha iimodeli ezinamalungu ambalwa, ade aqhelane nawo.
Yiba nendawo efanelekileyo yokufaka
Nje ukuba kuthengwe iphazili, kubalulekile khetha uqwalaselo olufanelekileyo lwendibano. Kukhethwa, indawo kufuneka ithule, apho kungekho kuhamba nzima kwabantu.
Khumbula ukuba lo msebenzi ufuna uxinzelelo oluninzi kwaye ingxolo egqithisileyo okanye intshukumo inokuphazamisa. Unoko engqondweni, kufanelekile ukukhetha ikona yegumbi okanye elinye igumbi elinetafile enkulu.
Kananjalo, kubaluleke kakhulu ukuba ubambe imvakalelo kwaye ungazisasazi iziqwenga ngokukhawuleza xa ufika ekhaya, njengoko zinokulahleka, neziza kuthi ekugqibeleni zibangele unxunguphalo. Khawufane ucinge, emva kweentsuku zokunikezelwa, uya kufumanisa ukuba umfanekiso awuphelelanga.
Sebenzisa itemplate njengesikhokelo
Sebenzisa isikhokelo njengesalathiso yingcebiso engenakuhoywa. Uninzi lwexesha, into yokudlala ngokwayo izisa ukuveliswa kwakhona komfanekiso oza kudityaniswa.
Gcina le modeli ifikeleleka kuye wonke umntu oncedisayo kwinkqubo yendibano, ukuze babhekise kuyo xa benemibuzo. Kwimeko apho, ingqalelo kwiinkcukacha inokwenza umahluko kunye nokugqitywa kwesantya.
Qala ngamacandelo ekona
Ingcebiso yethu yokugqibela inxulumene nokuchaza esona sicwangciso silungileyo sendibano, uqobo. Ngale ndlela, Kuyacetyiswa ukuba uqale ngeekona, ezinamaqhekeza anamacala athe tye. Ngale ndlela, unokuprinta ubungakanani bokugqibela bomfanekiso.
Ukuba inani lamaqhekeza likhulu kakhulu, ezona zinkulu emhlabeni zidibanisa ezinye ezinomtsalane Iziqwenga ezingamawaka angama-40 , Ibhlokhi yendibano inokuba yenye indlela ebalaseleyo, ngakumbi ukuba kukho abantwana abathatha inxaxheba. Ngamnye kubo unokuthatha uxanduva lwamaqhekeza amancinci aze umntu omdala athathe uxanduva lokudibanisa.
Phantse esiphelweni, sinika esinye isikhokelo: ukunyanzela ukulunga phakathi kwamaqhekeza sisimo sengqondo esingafunekiyo. Xa usazi ukuba azincedisi, khangela ezinye iindlela ukuze ungazonakalisi.
Izibonelelo zokudlala iiphazili
Ngokuqinisekileyo uvile nge izibonelelo iphazili. Indlela olu hlobo lomdlalo evuselela ngayo ingqondo iyamangalisa kwaye iphela ivelisa izibonelelo ezingenakubalwa zabantu beminyaka eyahlukeneyo.
Ukudibanisa iindawo ezincinci kunye nokukwazi ukwenza ipaneli ekugqibeleni ngu umthambo ogqwesileyo wokuqonda kubantu abadala, abantu abadala, ulutsha nabantwana, ngakumbi abo bakwisigaba semfundo.
Ngokubanzi, iphazili ilungile kwimemori kwaye xa isetyenziswa esikolweni, ngakumbi kwimfundo yabantwana abasaqalayo, ikwenza kube lula ukufunda. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi malunga neenzuzo zokusebenzisa esi sixhobo esikolweni, ithini imigaqo yayo okanye iziphi izibonelelo ezibonelela abantu abathanda ukudibanisa iphazili? Qhubeka ufunda.
1- Iphazili ivuselela ingqondo
Igalelo lokuqala eliphambili lepuzzle likwinqanaba lobukrelekrele, kuba iphazili ivuselela ingqondo. Ke ngoko uphuhliso lwezakhono zokuqonda kuyinzuzo enkulu.
Umsebenzi unefuthe ngqo kumandla omntwana okusombulula iingxaki, ukwandisa ukucinga kunye nokuphucula izakhono zakho. Ulwazi ngamanani, imibala, imilo, iimephu, indawo, ukugcwala, kunye nezinye iinkalo zolwazi zinokuvuselelwa.
2- Iphazili ilungile kwimemori
Enye into efanelekileyo yokusebenzisa iphazili kukuba ilungile imemori . Eli galelo libalulekile kubantu abaneengxaki ezinxulumene nokulibala.
Oku kuyenzeka, ke, ukufumana iziqwenga ezifanelekileyo kumntu ngamnye kwenza ukuba umntu aqokelele ulwazi malunga neefomathi kunye nezibini ezinokubakho. Ngaba unokucinga ngokufaka lo msebenzi kubantu abadala abaneengxaki zememori?
I-3- Iphazili ikhulisa ukulungelelaniswa kwemoto
Kukho isigaba sobuntwana esifunwa ngabancinci ukuba baphuhlise izakhono zabo zemoto. Iingalo neminwe yakhe ayikayazi imigama kunye nokuphathwa kwezinto.
Ke ngoko, iphazili ejolise kwaba baphulaphuli ithambekele kuyo khuthaza ukulungelelaniswa kweemoto kwasebusaneni . Ukuzama ukulungelelanisa isiqwenga esincinci kwenye kuyinkuthazo enkulu yokulawula ukuhamba kweengalo, amehlo kunye nezandla.
Nangona kunjalo, iphazili kufuneka ilungiselelwe ubudala obuthile bomntwana, ngamaqhekeza amakhulu, anemibala kunye nokufakwa okulula kakhulu. Kukwasebenza nakubantu abadala okanye abantu abadala abaneengxaki zokulungelelanisa.
I-4- Iphazili ibangela unxibelelwano lwasentlalweni
Ixesha lesikolo linqanaba lokuziqhelanisa nabantwana. Ukwenziwa kwabahlobo kunye nokuchongwa kwamaqela kunye nembono yoluntu ziinjongo ezibalulekileyo kubantwana besikolo.
Ukufezekisa le njongo, iphazili sisixhobo esihle ekuhlaleni . Ngexesha lokudlala, abantwana banokunxibelelana, basebenzisane, bakhuphisane, boyise, baxoxe, babelane ngempumelelo kunye nokusilela kwiklasi yonke.
Lo mdlalo ukwakhuthaza umbono wabantwana besikolo. Izakhono zokujonga, ukuthelekisa, ukuhlalutya kunye nokudibanisa izimvo zizinto ezinokunceda kwimfundo yomntwana ngamnye .
Ezi ngenelo zinwenwela kwinqanaba lokufikisa nasekubudaleni, zixabiseke kakhulu kwiimpawu zobungcali. Umbono weenkampani ezinkulu zamathuba emarike anokuzalwa ebuntwaneni, kunye nefuthe elifanelekileyo.
Kwimarike, iphazili ineenguqulelo ezininzi. Kwaye kufanelekile ukukhumbula ukuba banokuba nemilinganiselo eyahlukeneyo hayi nje loo nto ibekwe kwindawo ethe tye kwaye kwindawo enye.
Ezona ndidi zesintu zepuzzle zezi: ICube kaBedlam, iMicube Cube, iSum Cube, iPentaminos kunye neTangram. Fumana ezinye iinkcukacha malunga nezi modeli zePuzzle:
Lo mdlalo uqukethe Iziqwenga ezili-13 ezenza ityhubhu egqibeleleyo.Yindida eyenziwe nguBruce Bedlam. Zizonke, kukho iziqwenga ezilishumi elinesithathu ezenziwe ziityhubhu. Umbono kukwakha ityhubhu eyi-4 x 4 x 4 kwaye ube nobuchule, kuba umceli mngeni kukufumana enye yeendlela ezingaphezu kwamawaka ali-19 zokwenza.
Le nguqulo ithandwa kakhulu phakathi kweephazili kwifomathi ye-3D.
Ityhubhu yomlingo yinto endala esiyaziyo. Igama lalo elisemthethweni yiCube kaRubik, igama elizukisa umenzi walo, u-Ernő Rubik waseHungary. Yayilwa ngo-1974 kwaye yazalwa inkulu- yaphumelela ibhaso loMdlalo woNyaka. I-1980s yayiyincopho yeli phazili, elisasazekayo nanamhlanje.
Zingamaqhekeza e-polyethylene adibeneyo enza ityhubhu.
Olu lolunye uhlobo lwephazili emile okwe cube. Yayilwa nguPiet Hein, owayidala emva kokuya kwiklasi ye-quantum mechanics. Umdlalo usebenzisa iityhubhu ezisixhenxe ze-polyethylene ezidityanisiweyo zenze ityhubhu eyi-3 x 3 x 3. La maqhekeza enza ngaphezulu kweemilo ezingama-240.
Le phazili inayo izikwere ezintlanu zicwangciswe ngeendlela ezahlukeneyo. Xa zizonke, zineefomathi ezili-12 zePentaminó. Le puzzle iphefumlele iTetris okanye imidlalo yekhompyuter yeRampart. Lo mdlalo waphefumlela iTetris eyaziwayo.
El itangram Inamaqhekeza asixhenxe kuphela anokwenza amanani angaphezu kwama-5,000 XNUMX.
Nguwo iphazili okanye ijigsaw ngokwesiqhelo, xa kuthelekiswa neefom zentengiso ngakumbi namhlanje. Wazalelwa e-China enamaqhekeza asixhenxe kwaye xa bebonke banika amanani amaninzi. Intyilalwazi ide ichaze ukuba kunokwenzeka ukuqokelela amanani angaphezu kwama-5,000 XNUMX. Ngaphandle kwamathandabuzo, yayiyinkuthazo yemidlalo yephazili enobungakanani obunje namhlanje.
El iphazili enkulu ibizwa "UKeith Haring: ukuphindaphinda kabini"Ineziqwenga ezingama-32,256, imilinganiselo emalunga ne-5.44mx 1.92m kwaye ukupakishwa kwayo inobunzima be-17kg.
Ukuzaliswa komzobo "Ukudibana"nguJackson Pollock uthathwa njengeyona iphazili inzima ukudityaniswa.
Ngo-1997, ePeru, iqela labanqolobi iMovimento Revolucionario Tupac Amaru lahlasela indawo yokuhlala yonozakuzaku waseJapan, nangabantu abangaphezulu kwama-72 ababethinjwe kwaye betyhafile ngenxa yothethathethwano, bacela Iphazili yamawaka amabini. Oku kwenzelwe ukuba abo bathinjiweyo babe nokuzonwabisa kwaye bangabi noxinzelelo kangako ngothethathethwano.
Ngo-1933, iipuzzle baqala ukuba zekhadibhodi. Uninzi lwazo zonke, yenze yabiza ixabiso eliphantsi, yaze yavelisa ukuthengisa malunga neshumi lezigidi ngeveki!